427s Izinto ezingama-7 okufanele wazi ngeTokyo Station | japan-guide.com images and subtitles
Ukusebenzela abagibeli abangaphezu kwengxenye yesigidi ngosuku, iSiteshi seTokyo singesinye seziteshi eziphithizelayo eJapan. Isiteshi saqala ukuvulela umphakathi eminyakeni engaphezu kwe-100 edlule futhi ngokushesha saba yinto yokuhamba isikhungo esixhumanisa iTokyo nalo lonke elaseJapan. Isiteshi saseTokyo futhi singophawu olungamamitha ayi-zero emigqeni eminingi yesitimela. Namuhla, i-Tokyo Station esiyaziyo nesiyithandayo ingumphumela weminyaka yokubuyiselwa kanye nokwakha. Uhlangothi lukaMarunouchi lusanda kubuyiselwa enkazimulweni zalo zangaphambili, zomlando, ngenkathi i-Yaesu uhlangothi lunikeza ukubukeka kwesimanje nokwesimanje. Ngamazinga wayo amaningi futhi ingaphansi komhlaba omkhulu inikezela ngezitolo eziningi ezahlukene zokuthenga, zokudlela nezinsizakalo, kulula ukuchitha usuku lonke ulenga esiteshini saseTokyo nasezindaweni eziseduze kwaso. Ukwenza izinto zibe lula kuwe, sihlanganise uhlu lwezinto eziyi-7 okufanele sazi ngeTokyo Station. UJAPAN RAIL CAFE IJAPAN RAIL CAFE yayingowokuqala kuhlobo lwayo ukuvula eJapan. Itholakala ngaphesheya kwesango laseJaesu Central of Tokyo Station, iqukethe uhambo i-counter nendawo yokudlela enikeza abahambi imininingwane yokuhamba esesikhathini neJapan izitsha. Ukuhlobisa okungaphakathi nesikhumbuzo esiseJAPAN RAIL CAFE kuguquka ngezikhathi ezithile futhi kugxilwe kukho isifunda esihlukile saseJapan isikhathi ngasinye. Izisebenzi kwikhawunta yezokuvakasha zinikeza izeluleko zokubona nokubona kanye nenqubo ukudlula kojantshi nokuthengwa kwamathikithi. Lezi zinsizakalo zinikezela ngenqubo ebushelelezi futhi engenazinhlungu yokuhamba uhambo, olubaluleke kakhulu lapho uvakashela indawo entsha. Isikrini esikhulu esisebenzayo sibonisa amavidiyo okuhamba kanye nensiza yemisebenzi. I-cafe iyindawo ethokomele futhi evamile, enhle yokuhlangana nabangane noma isikhathi esidlulayo ngaphambi noma ngemuva kokugibela isitimela. Ama-Diners angabheka phambili ezitsheni zaseJapan, azinamathisele ngezinhlobonhlobo zotshwala neziphuzo ezingezona utshwala. Amabhokisi we-takeaway bento nawo angathengwa, kulabo abafushane ngesikhathi. Ekugcineni, isiko le-tatami mat elihlotshiswe ngokwesiko esigabeni se-cafe linikeza izivakashi indawo enhle yokuthatha izithombe zesikhumbuzo. inkonzo ye-ecbo ingubo Ukuthola ilokhi yemali engavunyelwe esiteshini saseTokyo kungaba usesho ngeze leze ikakhulukazi ngesikhathi sonyaka esiphakeme. Sebenzisa insiza ye-ecbo ingubo kuvumela umuntu ukuthi eqe konke lokho kuhlupheka aqonde a usuku lokuya ngaphandle kwemithwalo. Izinsizakalo zokugcina umthwalo wezinsuku eziningi zinikezwa ne-ecbo ingubo, okuyindlela enhle kulabo abafuna ukuhamba ukukhanya ohambweni lobusuku obubodwa. Kunezindlela zokubala eziningi ze-ecbo ingubo esiteshini saseTokyo. Ukuze usebenzise le nsiza, vele wenze ukubhuka kwemithwalo nokukhokha kwakho ku-ecbo iwebhusayithi yezingubo bese ubhekisa kwikhawunta ngosuku lokuthi ulahle umthwalo wakho. Isakhiwo saseTokyo Marunouchi Isakhiwo sokuqala saseTokyo Station sakhiwa nguTatsuno Kingo, umakhi wezakhiwo ezinhle waseJapan kusukela ekuqaleni kwekhulu lama-20, futhi kwaqedwa ngo-1914. Kodwa-ke, isakhiwo sesiteshi sonakaliswa kakhulu ngesikhathi se-WW2 futhi inguqulo eyenziwe lula kwesakhiwo sakhiwa kabusha emva kwempi. Kusukela ngo-2007 kuya ku-2012, isakhiwo esiteshini sabuyiselwa enkazimulweni yaso yangaphambi kwempi. Kube sekuthatha eminye iminyaka emihlanu ukuthi iplaza ephambi kwesiteshi ihlonishwe. Namuhla, izivakashi zingabona ukuthi iTokyo Station yayivame ukubukeka kanjani ngenkathi yakhiwa okokuqala ngo-1914, aqedele ngokuphelelwa ngamandla emaphethelweni asenyakatho naseningizimu ngokulandelana. I-Tokyo Station Gallery I-Tokyo Station Gallery iyimnyuziyamu yezobuciko etholakala ngaphakathi kweTokyo Station Marunouchi Building. Ngaphezu kwemibukiso yesikhashana, igalari indawo enhle ukubona ezinye zazo ukwakheka kwezitini zoqobo nokwakheka kwangaphakathi kwesitimela saseTokyo, okunikeza okuhlukile inhlanganisela yezobuciko namagugu amasiko. Abahambi bezokudla kanye nokuthenga ngasesitolo saseTokyo ngeke kufanele bakhathazeke ngokuthi balambile noma bangatholi okuthile abangase bakudinge noma bangakwazi ukukudinga. Kunezindawo eziningi zokudlela nezitolo ngaphakathi kwendawo enamathikithi nangaphandle endaweni yokufinyelela mahhala yeTokyo Station. Ngaphakathi kwendawo enamathikithi kukhona iGransta nendawo ethe xaxa yezitolo nezindawo zokudlela lapho kukodwa ungathola izinhlobonhlobo eziningi ezilungele ukudla, ukudla namakhekhe nezibuko ongazisebenzisa, kanye ne I-Ekibenya Matsuri, isitolo esidumile se-bento esithengisa ukudla kwasemini okunama-boxer kulo lonke izwe. Ngaphandle kwendawo yokufinyelela mahhala, i-Kitchen Street ingenye nje yokudlela okuningi izindawo ezinikeza izinhlobonhlobo zezindlela zokudlela. ITokyo Station Hotel ITokyo Station Hotel lavulwa ngo-1915 njengoba ihhotela lokunethezeka elinikeza izivakashi ezivelele ezivela phesheya kanye nasendaweni. Itholakala ngaphakathi kweTokyo Station Marunouchi Building, i-classic yase-Europe eyakhiwe ngokunethezeka Ihhotela liqukethe amakamelo ezivakashi amahle angu-150, izindawo zokudlela eziyishumi nemigoqo, nokuqina kanye izindawo ze-spa. Amanye amakamelo anikela ngombono omuhle ohlangothini lwaseMarunouchi seTokyo Station, futhi kunezindawo lapho kuhlala izivakashi zingabheka phezulu ukuze zibone ukwakheka kwamadayimane bese kwehle esiteshini uqobo. Akukhona nje kuphela ukuthi insizakalo yangaphakathi endlini iyamangaza, izivakashi ezihlala njalo ezifika yiNarita Express isitimela esivela eNairita Airport noma ngesitimela esiyinhlamvu singakwazi ukujabulela umnyango omuhle kakhulu wendlu yamaphoyisa. Izindawo eziseduzane naseTokyo Station Kukhona izindawo zokubona eziningi ngaphakathi ukuhamba okulula kweTokyo Station, kufaka phakathi izifunda zebhizinisi iMarunouchi ne-Otemachi Nesigodlo se-Imperial. Ezikhungweni zezikebhe ezisheshayo ezungeze iTokyo Station ohlangothini lwaseMarunouchi, iMarunouchi Isakhiwo, iShin-Marunouchi isakhiwo neJapan Post Tower KITTE kunikeza izivakashi lezi okuhlangenwe nakho okuhlukahlukene kakhulu kokuthenga nokudla. Izindawo ezikulezi zakhiwo ezintathu zinikeza umbono omuhle wethanga lesitini elibomvu laseTokyo Isiteshi. Kude kude, i-Imperial Palace kanye ne-Imperial Palace East Garden, ezitholakala ngezizathu zangaphambili zeNqaba yase-Edo, yenza ukuvakasha kwezemfundo namasiko. Futhi lokho kuphetha uhlu lwethu lwezinto okufanele bazi ngeTokyo Station. Ngethemba ukuthi lokhu kukunikeze umbono wezinto okufanele uzenze phakathi nasesiteshini. Ngemininingwane engaphezulu noma ukubuka enye ividiyo, chofoza izixhumanisi ezikrinini manje noma ikhanda phezu kwe-Japan Guide dot com, umhlahlandlela wakho wokuhamba osesikhathini ovulekile, wokuqala ovela eJapan. Siybaonga ngokubukela. Qiniseka ukuthi ubhalisa bese uqhafaza insimbi yokwazisa ngamavidiyo amaningi mayelana neJapan. Ukuhamba okujabulisayo!
Izinto ezingama-7 okufanele wazi ngeTokyo Station | japan-guide.com
< start="3.159" dur="5.491"> Ukusebenzela abagibeli abangaphezu kwengxenye yesigidi ngosuku, iSiteshi seTokyo singesinye seziteshi eziphithizelayo >
< start="8.65" dur="1.52"> eJapan. >
< start="10.17" dur="5.45"> Isiteshi saqala ukuvulela umphakathi eminyakeni engaphezu kwe-100 edlule futhi ngokushesha saba yinto yokuhamba >
< start="15.62" dur="3.31"> isikhungo esixhumanisa iTokyo nalo lonke elaseJapan. >
< start="18.93" dur="5.28"> Isiteshi saseTokyo futhi singophawu olungamamitha ayi-zero emigqeni eminingi yesitimela. >
< start="24.21" dur="5.09"> Namuhla, i-Tokyo Station esiyaziyo nesiyithandayo ingumphumela weminyaka yokubuyiselwa >
< start="29.3" dur="1.66"> kanye nokwakha. >
< start="30.96" dur="5.759"> Uhlangothi lukaMarunouchi lusanda kubuyiselwa enkazimulweni zalo zangaphambili, zomlando, ngenkathi i-Yaesu >
< start="36.719" dur="4.191"> uhlangothi lunikeza ukubukeka kwesimanje nokwesimanje. >
< start="40.91" dur="5.6"> Ngamazinga wayo amaningi futhi ingaphansi komhlaba omkhulu inikezela ngezitolo eziningi ezahlukene zokuthenga, zokudlela >
< start="46.51" dur="6.75"> nezinsizakalo, kulula ukuchitha usuku lonke ulenga esiteshini saseTokyo nasezindaweni eziseduze kwaso. >
< start="53.26" dur="8.54"> Ukwenza izinto zibe lula kuwe, sihlanganise uhlu lwezinto eziyi-7 okufanele sazi ngeTokyo Station. >
< start="61.8" dur="5.2"> UJAPAN RAIL CAFE IJAPAN RAIL CAFE yayingowokuqala kuhlobo lwayo >
< start="67" dur="2.43"> ukuvula eJapan. >
< start="69.43" dur="4.779"> Itholakala ngaphesheya kwesango laseJaesu Central of Tokyo Station, iqukethe uhambo >
< start="74.209" dur="5.541"> i-counter nendawo yokudlela enikeza abahambi imininingwane yokuhamba esesikhathini neJapan >
< start="79.75" dur="2.08"> izitsha. >
< start="81.83" dur="5.5"> Ukuhlobisa okungaphakathi nesikhumbuzo esiseJAPAN RAIL CAFE kuguquka ngezikhathi ezithile futhi kugxilwe kukho >
< start="87.33" dur="4.36"> isifunda esihlukile saseJapan isikhathi ngasinye. >
< start="91.69" dur="5.36"> Izisebenzi kwikhawunta yezokuvakasha zinikeza izeluleko zokubona nokubona kanye nenqubo >
< start="97.05" dur="3.769"> ukudlula kojantshi nokuthengwa kwamathikithi. >
< start="100.819" dur="5.461"> Lezi zinsizakalo zinikezela ngenqubo ebushelelezi futhi engenazinhlungu yokuhamba uhambo, olubaluleke kakhulu >
< start="106.28" dur="1.95"> lapho uvakashela indawo entsha. >
< start="108.23" dur="6.62"> Isikrini esikhulu esisebenzayo sibonisa amavidiyo okuhamba kanye nensiza yemisebenzi. >
< start="114.85" dur="5.29"> I-cafe iyindawo ethokomele futhi evamile, enhle yokuhlangana nabangane noma isikhathi esidlulayo >
< start="120.14" dur="2.86"> ngaphambi noma ngemuva kokugibela isitimela. >
< start="123" dur="4.91"> Ama-Diners angabheka phambili ezitsheni zaseJapan, azinamathisele ngezinhlobonhlobo zotshwala >
< start="127.91" dur="2.64"> neziphuzo ezingezona utshwala. >
< start="130.55" dur="5.18"> Amabhokisi we-takeaway bento nawo angathengwa, kulabo abafushane ngesikhathi. >
< start="135.73" dur="6.62"> Ekugcineni, isiko le-tatami mat elihlotshiswe ngokwesiko esigabeni se-cafe linikeza izivakashi >
< start="142.35" dur="6.13"> indawo enhle yokuthatha izithombe zesikhumbuzo. >
< start="148.48" dur="5.66"> inkonzo ye-ecbo ingubo Ukuthola ilokhi yemali engavunyelwe esiteshini saseTokyo >
< start="154.14" dur="4.16"> kungaba usesho ngeze leze ikakhulukazi ngesikhathi sonyaka esiphakeme. >
< start="158.3" dur="4.76"> Sebenzisa insiza ye-ecbo ingubo kuvumela umuntu ukuthi eqe konke lokho kuhlupheka aqonde a >
< start="163.06" dur="1.96"> usuku lokuya ngaphandle kwemithwalo. >
< start="165.02" dur="4.56"> Izinsizakalo zokugcina umthwalo wezinsuku eziningi zinikezwa ne-ecbo ingubo, okuyindlela enhle >
< start="169.58" dur="3.35"> kulabo abafuna ukuhamba ukukhanya ohambweni lobusuku obubodwa. >
< start="172.93" dur="4.15"> Kunezindlela zokubala eziningi ze-ecbo ingubo esiteshini saseTokyo. >
< start="177.08" dur="4.95"> Ukuze usebenzise le nsiza, vele wenze ukubhuka kwemithwalo nokukhokha kwakho ku-ecbo >
< start="182.03" dur="6.29"> iwebhusayithi yezingubo bese ubhekisa kwikhawunta ngosuku lokuthi ulahle umthwalo wakho. >
< start="188.32" dur="5.43"> Isakhiwo saseTokyo Marunouchi Isakhiwo sokuqala saseTokyo Station sakhiwa >
< start="193.75" dur="5.48"> nguTatsuno Kingo, umakhi wezakhiwo ezinhle waseJapan kusukela ekuqaleni kwekhulu lama-20, futhi >
< start="199.23" dur="1.8"> kwaqedwa ngo-1914. >
< start="201.03" dur="6.32"> Kodwa-ke, isakhiwo sesiteshi sonakaliswa kakhulu ngesikhathi se-WW2 futhi inguqulo eyenziwe lula >
< start="207.35" dur="3.15"> kwesakhiwo sakhiwa kabusha emva kwempi. >
< start="210.5" dur="5.25"> Kusukela ngo-2007 kuya ku-2012, isakhiwo esiteshini sabuyiselwa enkazimulweni yaso yangaphambi kwempi. >
< start="215.75" dur="4.86"> Kube sekuthatha eminye iminyaka emihlanu ukuthi iplaza ephambi kwesiteshi ihlonishwe. >
< start="220.61" dur="4.95"> Namuhla, izivakashi zingabona ukuthi iTokyo Station yayivame ukubukeka kanjani ngenkathi yakhiwa okokuqala >
< start="225.56" dur="7.68"> ngo-1914, aqedele ngokuphelelwa ngamandla emaphethelweni asenyakatho naseningizimu ngokulandelana. >
< start="233.24" dur="5.1"> I-Tokyo Station Gallery I-Tokyo Station Gallery iyimnyuziyamu yezobuciko >
< start="238.34" dur="3.33"> etholakala ngaphakathi kweTokyo Station Marunouchi Building. >
< start="241.67" dur="4.15"> Ngaphezu kwemibukiso yesikhashana, igalari indawo enhle ukubona ezinye zazo >
< start="245.82" dur="5.62"> ukwakheka kwezitini zoqobo nokwakheka kwangaphakathi kwesitimela saseTokyo, okunikeza okuhlukile >
< start="251.44" dur="5.15"> inhlanganisela yezobuciko namagugu amasiko. >
< start="256.59" dur="3.75"> Abahambi bezokudla kanye nokuthenga ngasesitolo saseTokyo ngeke >
< start="260.34" dur="5.14"> kufanele bakhathazeke ngokuthi balambile noma bangatholi okuthile abangase bakudinge noma bangakwazi ukukudinga. >
< start="265.48" dur="4.47"> Kunezindawo eziningi zokudlela nezitolo ngaphakathi kwendawo enamathikithi nangaphandle >
< start="269.95" dur="2.64"> endaweni yokufinyelela mahhala yeTokyo Station. >
< start="272.59" dur="5.72"> Ngaphakathi kwendawo enamathikithi kukhona iGransta nendawo ethe xaxa yezitolo nezindawo zokudlela lapho kukodwa >
< start="278.31" dur="6.32"> ungathola izinhlobonhlobo eziningi ezilungele ukudla, ukudla namakhekhe nezibuko ongazisebenzisa, kanye ne >
< start="284.63" dur="7.42"> I-Ekibenya Matsuri, isitolo esidumile se-bento esithengisa ukudla kwasemini okunama-boxer kulo lonke izwe. >
< start="292.05" dur="4.38"> Ngaphandle kwendawo yokufinyelela mahhala, i-Kitchen Street ingenye nje yokudlela okuningi >
< start="296.43" dur="6.53"> izindawo ezinikeza izinhlobonhlobo zezindlela zokudlela. >
< start="302.96" dur="5.45"> ITokyo Station Hotel ITokyo Station Hotel lavulwa ngo-1915 njengoba >
< start="308.41" dur="5"> ihhotela lokunethezeka elinikeza izivakashi ezivelele ezivela phesheya kanye nasendaweni. >
< start="313.41" dur="4.82"> Itholakala ngaphakathi kweTokyo Station Marunouchi Building, i-classic yase-Europe eyakhiwe ngokunethezeka >
< start="318.23" dur="5.46"> Ihhotela liqukethe amakamelo ezivakashi amahle angu-150, izindawo zokudlela eziyishumi nemigoqo, nokuqina kanye >
< start="323.69" dur="2.47"> izindawo ze-spa. >
< start="326.16" dur="5.01"> Amanye amakamelo anikela ngombono omuhle ohlangothini lwaseMarunouchi seTokyo Station, futhi kunezindawo >
< start="331.17" dur="5.24"> lapho kuhlala izivakashi zingabheka phezulu ukuze zibone ukwakheka kwamadayimane bese kwehle esiteshini >
< start="336.41" dur="1.5"> uqobo. >
< start="337.91" dur="5.47"> Akukhona nje kuphela ukuthi insizakalo yangaphakathi endlini iyamangaza, izivakashi ezihlala njalo ezifika yiNarita Express >
< start="343.38" dur="8.17"> isitimela esivela eNairita Airport noma ngesitimela esiyinhlamvu singakwazi ukujabulela umnyango omuhle kakhulu wendlu yamaphoyisa. >
< start="351.55" dur="6.31"> Izindawo eziseduzane naseTokyo Station Kukhona izindawo zokubona eziningi ngaphakathi >
< start="357.86" dur="5.75"> ukuhamba okulula kweTokyo Station, kufaka phakathi izifunda zebhizinisi iMarunouchi ne-Otemachi >
< start="363.61" dur="2.04"> Nesigodlo se-Imperial. >
< start="365.65" dur="5.14"> Ezikhungweni zezikebhe ezisheshayo ezungeze iTokyo Station ohlangothini lwaseMarunouchi, iMarunouchi >
< start="370.79" dur="5.439"> Isakhiwo, iShin-Marunouchi isakhiwo neJapan Post Tower KITTE kunikeza izivakashi lezi >
< start="376.229" dur="3.851"> okuhlangenwe nakho okuhlukahlukene kakhulu kokuthenga nokudla. >
< start="380.08" dur="5.089"> Izindawo ezikulezi zakhiwo ezintathu zinikeza umbono omuhle wethanga lesitini elibomvu laseTokyo >
< start="385.169" dur="1.411"> Isiteshi. >
< start="386.58" dur="5.22"> Kude kude, i-Imperial Palace kanye ne-Imperial Palace East Garden, ezitholakala >
< start="391.8" dur="6.02"> ngezizathu zangaphambili zeNqaba yase-Edo, yenza ukuvakasha kwezemfundo namasiko. >
< start="397.82" dur="3.5"> Futhi lokho kuphetha uhlu lwethu lwezinto okufanele bazi ngeTokyo Station. >
< start="401.32" dur="4.21"> Ngethemba ukuthi lokhu kukunikeze umbono wezinto okufanele uzenze phakathi nasesiteshini. >
< start="405.53" dur="5.78"> Ngemininingwane engaphezulu noma ukubuka enye ividiyo, chofoza izixhumanisi ezikrinini manje noma ikhanda >
< start="411.31" dur="6.199"> phezu kwe-Japan Guide dot com, umhlahlandlela wakho wokuhamba osesikhathini ovulekile, wokuqala ovela eJapan. >
< start="417.509" dur="1"> Siybaonga ngokubukela. >
< start="418.509" dur="5.131"> Qiniseka ukuthi ubhalisa bese uqhafaza insimbi yokwazisa ngamavidiyo amaningi mayelana neJapan. >
< start="423.64" dur="0.86"> Ukuhamba okujabulisayo! >